Cristiano Ronaldo oo Tallaabo weyn qaadaya isagoo bixinaya Mushaharka ciyaartoyda… – Gool FM
(Turin) 05 Maajo 2020. Weeraryahanka sare ee Cristiano Ronaldo ayaa sida wararku ay sheegayaan waxa uu bixinayaa mushaharka xiddigaha ay soo wajahday dhaqaale xumada.
CR7 ayaa lacag ugu deeqaya ciyaartoyda horyaallada heerka hoose ee dalkiisa Portugal inta lagu guda jiro mudada uu socdo caabuqa Coronavirus.
Sida ay daabacday Wakaaladda wararka ee Associated Press laacibka kooxda Juventus ayaa bilaabay qorshe ay xiddigaha xulkiisa Portugal uga qeyb qaadanayaan oo qeyb ka mid ah lacagtoodii abaal-marinta ee ay ku heleen inay u soo baxeen EURO 2020 ugu deeqaan xiddigaha horyaallada hoose ee dalkooda.
Sababo la xiriira faafaha Coronavirus oo ku fiday qaaradda Yurub ayaa dib loogu dhigay muddo sanad ah Koobkii qarammada Yurub ee la qaban lahaa xagaagan.
Yeelkeede, ciyaaryahanka kooxda Inter Milan ee Joao Mario kaasoo amaah ku joogo Naadiga Lokomotiv Moscow ayaa shaaca ka qaaday sida uu Ronaldo isagu dayayo inuu u caawiyo ciyaartoyda horyaallada heerka hoose iyo shaqaalaha caafimaadka dalkaasi Portugal.
“Qof walba xaalad xun ayay u tahay, balse xaaladda noocaan oo kale ah waa kuwa ugu xun” ayuu yiri Joao Mario.
“Waxa ay xaqiiqdii u baahan yihiin caawinaadeenna, sidaasi darteed waxaan isku dayayaa inaan taageero, Cristiano waxa uu inoo soo bandhigay qorshe aan ku caawin karno ciyaartoyda dhibtoonaysa, kuwaasoo aan heysan qandaraasyo rasmi ah.”
“Waxa uu mar walba isku dayayaa inuu noqdo tusaale, kaliya annaga inooma ahan, balse xitaa waxa uu u yahay naftiisa, waxaan arki karnaa gacanta uu ka geysanayo xaaladda ka taagan Portugal, sidaasi awgeed annaga ka ciyaartooy ahaan wax weyn ayaan u aragnaa howsha uu qabanayo.”
Lix ciyaaryahan oo khadka dhexe ka ciyaara kuwaasoo bartilmaameed u ah xagaagan Kooxda Arsenal... + SAWIRRO